Oct262020 by साहारा संदेशNo Comments
दैनिक खाना नखाइ किरा खाने व्यक्तिले गरे यस्तो: सुन्दा मात्रै सबै चकित
बिदेश, मनोरञ्जन, सोसल मिडिया
एजेन्सी: विश्वमा धेरै प्रतिभा भएका मानिसहरु छन् । धेरैले अनौठा प्रतिभा देखाएर बिश्वलाई चकित पनि पारिरहेका छन्। कसैले त अनौठो र पत्याउनै मुकिस्ल पर्ने कार्य गरेर नयाँ रेकर्ड पनि राखेका छन् । यस्तै एक युवकले पनि अनौठो कार्य गरेर विश्वलाई नै चकित पारेका छन् । ती अनौठा प्रतिभा भएका मानिस भारतको तमिल नाडुस्थित कोइम्बटोरका हुन् ।...
Oct182020 by साहारा संदेशNo Comments
के दसैँमा विदेशबाट घर आउँदै हुनुहुन्छ ? सरकार गर्यो यस्तो नयाँ नियम (जान्कारि सहित)
काठमाडौं । दसैँमा विदेशबाट घर फर्कँदै हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने ल्याउने विदेशबाट ल्याउँदा कतिपय सामानमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्दैन। केही सामानको भन्सार शुल्कमा सीमितता तोकिएको छ । सीमितता तोकिएका सामान बढी ल्याएमा जफत हुने तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९, उपदफा (३) ले २०७७ जेठ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी यात्रुहरुले आफ्नो साथमा ल्याउन पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तुका सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यबस्था गरेको छ । निम्न सामग्री ल्याउँदा भन्सार शुल्क पूर्ण छुट हुनेछ लुगाफाटा, बिच्छ्यौना, घर गृहस्थीका पुराना सामान औषधि उपचार गराई फर्किएका बिरामीले ल्याएका औषधि शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिले सहाराका रुपमा प्रयोग गरेका सामान ट्याबलेट, ल्यापटप, डेस्कटप, कम्प्युरटर, घडी, क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा, सेलुलर मोबाइल फोन र पेनड्राइभ (बढीमा एक/एक थानसम्म) बच्चा राख्ने ...
Sep292020 by साहारा संदेशNo Comments
कोरोना भाइरसको २ करोड ५० लाख खोप नेपाल आउने: खुशीको माहोल
नेपाल, बिदेश, राजनिती, समाचार, स्वास्थ्य
काठमाडौं । रुसले उत्पादन गरेको कोरोना भाइरसवि’रुद्धको खोप नेपालमा आउने भएको छ । नेपालमा २ करोड ५० लाख डोज रुसी भ्याक्सिन ‘स्पुटनिक–५’ भित्र्याउने सम्झौता भएको छ। रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड र नेपाली औषधी उत्पादक कम्पनी ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सबीच सम्झौता भएको हो। नेपाल ल्याइने साढे २ करोड डोज भ्याक्सिनले नेपालको ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई समेट्ने छ। यो भ्याक्सिन ‘ह्युमन एडेनोभाइरल भेक्टर्स प्लेटफर्म’ मा आधारित रहेको बताइएको छ।रुसी सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा आविष्कार गरिएको यो भ्याक्सिनलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनकी छोरीमाथि सफल परीक्षण गरिएको भनेर प्रचार गरिँदै आएको छ। रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्डसँग सहकार्य गरी कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप नेपाल भित्र्याउने सम्झौता गरिएको ट्रिनिटीका निर्देशक किशोर अधिकारीले बताउनुभयो । स्पुटनिक–५ को अन्तिम परीक्षणको नतिजा र ने...
Sep262020 by साहारा संदेशNo Comments
खुल्यो कं’गोमा नेपाली सैनिक कु’टिनुको रहस्य: पुरै पढ्नुहोला
नेपाल, बिदेश, समाचार
काठमाडौँ : संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा गएका सैनिकहरू अशान्त भइदिँदा बिरानो मुलुक कं’गोमा सैनिक जवानहरू आफ्नै कमा,न्डरबाट नि’र्घा’त कु,टि’एका छन् । कं’गो मिसनमा खटिएका नेपाली सेनाका जवान सहसेनानीबाट नि’र्घा’त कु’टि’एका हुन् । कु’टिएकामध्ये एक सेनाको शरीरमा ग’म्भी’र नी’लडा’म छ । ज्वा’ला गणबाट कं’गोको शान्ति मिसनमा गएका सैनिक जवान नवराज माझी ०७७ असोज ८ गते राति ३ सहसेनानीबाट नि’र्घा’त कु’टिएका हुन् । विदेशी भूमिमा आफ्नै सैनिक कु’टे,र बहादुरी देखाउने ३ सहसेनानी हुन्– इन्द्र थापा, सुभास हुमागाई र योगेन्द्र धिताल । कु’टिएका माझीको शरीरमा गहिरो नी’ल’डा’म भए पनि कु’टि’एका अन्य सैनिक जवानहरूमा भने त्यस्तो नदेखिएको स्रोतले जनाएको छ । सहायक रथी तथा सैनिक प्रवक्ता सन्तोषवल्लब पौड्यालले २०७७ असोज ८ गते बिहीबार राति भएको घटनाबारे जानकारी प्राप्त भएको साँघुसँग बताए । सैनिक ज...
डब्लु एच ओले कोरोनाको खोपका बारेमा भन्यो यस्तो डरलाग्दो कुरा: यती धेरै मानिस मर्ने
नेपाल, बिदेश, समाचार, स्वास्थ्य
काठमाडौँ, १० असोज: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले कोरोनाभाइरसको खोप आए पनि करिब २० लाख मानिसको मृत्यु हुने बताएको छ । विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस तीव्र रुपमा फैलिएको भन्दै संगठनले खोप आएपनि मर्नेको संख्या भने २० लाख मानिको मृत्यु हुने सम्भावना रहेको बताएको हो । डब्ल्यूएचओको स्वास्थ्य आपतकालिन कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डा. माइक रायनले खोप पत्ता लागे पनि त्यसको प्रभावकारी प्रयोग हुनु पहिला नै २० लाख मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना उच्च रहेको चेतावनी दिएको छ। डा.माइक रयानले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै खास अभियान नचलाए यो संख्या अझ बढ्ने बताएका छन्। चीनमा गत वर्षको अन्त्यमा कोभिड–१९ देखिए यता करीब १० लाख मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। विश्वमा संक्रमण दर निरन्तर बढिरहेको र अहिले तीन करोड २० लाख उपचाररत संक्रमित रहेको बीबीसीले जनाएको छ । न्युज २४ नेपालबाट साभार ।...
Sep182020 by साहारा संदेशNo Comments
३ वर्षदेखी म’रेकी आमाको श’व फ्रीजमा राखेर पेन्सन खाने भेटिएपछी भयो यस्तो
भारत: भारतमा एक व्यक्तिले आमाको शव तीन वर्षसम्म फ्रिजभित्र लुकाएर राखेको पाइएको छ । छिमेकी र नातेदारले समेत थाहा नपाउनेगरी आमाको शव फ्रिजमा राख्नुको कारण भने अचम्मको छ । कोलकाताका शुभव्रता मजुमदारले अरु कारणले नभई आमाको नाममा राज्यले दिने पेन्सन खानका लागि शवलाई फ्रिजमै राखेका हुन् ।आमाको शव सड्नबाट जोगाउन उनले केमिकल प्रयोग गरेका थिए । मृत्यु भएकी आमाको पेन्सन खान उनले यो जुक्ति निकालेको प्रहरीको प्रारिम्भक अनुसन्धानले देखाएको छ । तर उनले मृत शरीर फ्रिजभित्र राखे आमाको पुर्नजन्म हुने विश्वासमा यस्तो गरेको जिकिर गरेका छन् । उनको यस्तो हर्कत एक छिमेकीले थाहा पाएपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । उनलाई कोलकाता प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । अभियुक्त छाला प्राविधिक भएकाले मृत शरीर जोगाउने तरिका उनलाई राम्रोसँग थाहा थियो । त्यसैले उनले केमिकलको प्रयोग गरी आमाको शवलाई सुर...
Sep162020 by साहारा संदेशNo Comments
अमेरिकामा भएका नेपालीलाई निकाल्न अमेरिकी अदालतको निर्णय: पुरा पढ्नुहोला
काठमाडौं : अमेरिकाबाट करिब ४ लाख आप्रवासी निकाल्न डोनाल्ड ट्रम्प सरकारलाई बाटो खुलेको छ । अब ट्रम्प सरकारले नेपालसहित, एल साल्भाडोर, हाइटी, निकारागुआ, सुडान र होन्डुरासका ‘टेम्पोररी प्रोटेक्सन स्टाटस’ (टिपिएस) अन्तर्गत अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरुलाई देशबाट निकाल्न सक्नेछ । यी ६ देशका टिपिएस अन्तर्गत अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीको संख्या करिब ४ लाख भएको न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ । यी सबैलाई अमेरिकाबाट निकाल्न ट्रम्प सरकारलाई बाटो खुलेको छ । ट्रम्प सरकारले यसअघि नै विभिन्न देशका नागरिकले पाएको टिपिएस सुविधा खारेज गर्ने प्रयास गरेको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू पदमा आएदेखि नै टिपिएसको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रयास गरेका थिए । कानुनी जटिलता र मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण उनले टिपिएस सुविधा खारेज गरेर उनीहरुलाई निकाल्न सकिरहेका थिएनन् । सोमबारको अदालतको फैसलाले उनलाई आफ्नो यो...
Sep122020 by साहारा संदेशNo Comments
चीनको कालो करतुत : कोरोना मानव निर्मित भएको प्रमाण आफुसँग नै रहेको लि-मेंगको दाबी
बिदेश, राजनिती, समाचार
काठमाडौँ, २७ भदौ : चीनकी महिला भाइरोलजिस्ट लि-मेंग यानले कोरोना भाइरस मानव निर्मित रहेको आरोप लगाएकी छिन् । उनले कोरोना भाइरस मानव निर्मित रहेको र सो सम्बन्धि पर्याप्त प्रमाणहरु आफुसंग रहेको दाबी गरेकी छन् । लि- मेँगले कोरोना भाइरस चीनको वुहान राज्यको मासुपसलबाट आएको नभई कुनै ल्यावबाट उत्पति भएको बताएकी छिन् । उनले कोरोना भाइरस वुहानको मासु पसलबाट उत्पति नभएको भए कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने प्रश्नमा, यो वुहानको कुनै ल्याबबाट उत्पत्ति भएको र यो प्राकृतिक नभएर मानव निर्मित भएको बताएकी छिन् । साथै उनले छिट्टै यो भाइरस मानव निर्मित भएको पुष्टि गर्ने समेत बताएकी छिन् । उनले चीन सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै भाइरसको विषयमा चीनले नै धेरै कुराहरु लुकाएको आरोप लगाएकी छिन् । अमेरिकादेखि युरोपका कैयौं देशहरुले समेत यो खतरनाक भाइरसको उत्पत्तिलाई लिएर चीनलाई नै जिम्मेवार ठान्दै आएका छन् । (...
Sep112020 by साहारा संदेशNo Comments
प्रेम पर्स्ताव राख्नु अघी नै प्रमिको शरिरमा आगो लागेपछी भयो यस्तो हंगामा
एजेन्सी: मानिस आफ्नो प्रेममा सफलता पाउनका लागि जे पनि गर्न तयार रहन्छन् । आफ्नी प्रेमिकालाई मनाउनका लागि प्रेमी जस्तोसुकै अवस्था पार गर्न तयार हुन्छन् । यसको गतिलो उदाहरण बेलायतमा देखिएको छ । लण्डनमा एक व्यक्तिले आफ्नी प्रेमिकालाई प्रस्ताव राख्न मोलेको खतरा देख्दा जोकोही चकित हुन्छन् । त्यहाँ एक स्टन्टम्यान रिकी यशले आफ्नो पेशाको आधारमा प्रेमिकालाई प्रस्ताव राख्न खतरासँग खेलेका छन् । रिकी यशले आफ्नो शरीरमा आगो लगाएर घुँडा टेक्दै प्रस्ताव राखे । अहिले उनको उक्त प्रेम प्रस्तावको फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । द न्यूयोर्क पोस्टकाअनुसार स्टन्टम्यान रिकीले शरीरमा आगो बालेर आफ्नी प्रेमिका क्याट्रिना डोब्सनसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव राखे । एक पेशेवर स्टन्टम्यान भएकोले, उनले प्रस्ताव अघि नै सबै तयारीहरू गरिसकेका थिए, त्यसैले उनले आगोबाट कुनै नोक्सान भोगेनन् । &...
Jul262020 by साहारा संदेशNo Comments
नेपालिहरु भारत जान छोडे… भारतलाइ बढदै गयो तनाब
काठमाण्डौं । नेपाल-भारत सीमा ब’न्द रहे पनि दुवै देशका स्थानीय प्रशासनसँग सम’न्वय गरेर अहिले केही नेपालीहरू भारतको हिमाचलस्थित स्याउ बगैँचामा काम गर्न जान थालेको नेपाली कामदार र हिमाचलस्थित भारतीय स्याउ कृषकहरूले बताएका छन । उनीहरूका अनुसार कामदारको अ’भाव भएपछि कतिपय भारतीय कृषक र स्याउ व्यवसायीहरूले नेपाल-भारत नाकासम्मै सवारीसाधन पठाएर मजदुरहरू लैजान थालेका हुन । त्यसरी जान लागेका नेपालीहरूलाई “व्यावहारिकता हेरेर जान अनुमति दिइएको” सीमा क्षेत्रका कतिपय अधिकारीहरूले बीबीसी बताएका छन । तर केही दिनदेखि दुवै देशका सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले भारत प्रवेश गर्ने खोज्ने मानिसलाई अ’वरो’ध गरेको हिमाचल जान सीमासम्म पुगेका केही नेपालीहरूले बताएका छन । स्याउ पाक्ने मौसम सुरु हुनै लागेकाले अहिले हिमाचलमा मजदुरको व्या’पक क’मी भएको बताइन्छ । जानकारहरूका अनुसार विगतमा हिमाचलस्थित स्याउ बगैँचाम...